Shaxda Shiinaha ee Buug-gacmeedka Haydarooliga ah ee loo yaqaan 'TS TS' ee loogu talagalay soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha Isbitaalka | Wanyu
Kala duwanaanta miiska hawlgalka guud, waxaan isticmaalnaa nidaamka hawo qaadista iyo guga gaaska si aan u hagaajino taarikada dhabarka iyo lugta. Samee hannaanka hagaajinta labadaba aamusnaan iyo habboon.
Saldhigga Y-qaabeeya waxaa loo adeegsadaa in lagu hubiyo miiska qalliinka ee Haydarooliga inuu leeyahay xasillooni sare iyo meel bannaan oo bilaash ah, si ay shaqaalaha caafimaadku ugu dhowaadaan bukaanka meel eber ah.
Naqshadeynta giraangiraha waaweyn ayaa sidoo kale ka dhigaya anti-gariirka iyo kala-baxa inta lagu jiro dhaqdhaqaaqa.
1. Xumbada Xusuusta Sare
Waxyaabaha dusha sare ee miiska qalliinka Haydarooliga ayaa ah kuwa ololka celiya oo aan ka soo horjeedka lahayn. Joodariga mideysan ee polyurethane (PU) waa fududahay in la nadiifiyo wuxuuna leeyahay adeeg dheer.
2. Buundada Kilyaha oo la Dhex Dhex-dhisay.
Geli gacan qabashada godka u dhigma, wareeji wareegga oo ka dhig buundada dhexda kor u qaad ama u dhaadhac booska ku habboon, ka dibna kala soo bax xarkaha. Miiska hawlgalka ee haydarooliga TS, sare u qaadka buundada dhexda ayaa ka sarraysa 100mm.
Xumbada Xusuusta Sare
3. La Keenay Hydraulic System
Nidaamka Haydarooliga laga keeno Mareykanka wuxuu ka dhigayaa dhaqdhaqaaqa miiska hawlgalka gacanta mid deggan oo dhaqso leh.
4. Angular Ahagaajinta with Gsida Springs
Labada taarikada dambe iyo isugeynta miisaanka lugta ee miiska qalliinka ee loo yaqaan 'TS Haydarooliga' waxaa lagu qalabeeyaa dhismayaasha taageerada guga gaaska, kaas oo sameeya isbedello kala duwan oo deggan, aamusnaan ah, oo aan gariir lahayn, iyadoo si wax ku ool ah loo ilaalinayo qaab dhismeedka wadajirka ah kana hortagaya bukaanka inuu dhaco.
5. LNaqshadeynta dharka
Saldhigga miiska mashiinka mashiinka mashiinka farsameysan waxaa loogu talagalay qasriyo waaweyn (dhexroor ≥100mm), kaas oo u nugul dhaqaaqa. Qasriyayaashu way kacayaan markay istaagaan, sariirta sariirtiisu waxay xiriir adag la leedahay dhulka, xasillooniduna way wanaagsan tahay.
3. Nidaamka Haydarooliga ee dibadda laga keeno
4.Qalabaynta isdabajoogga ah ee Gas Springs
Naqshadaynta shaashadda weyn
Shayga Qaabka Jadwalka Hawlgalinta ee Haydarooliga
Dherer iyo Ballaaran 2050mm * 500mm
Sare u qaad (kor iyo hoos) 890mm / 690mm
Saxanka Madaxa (Kor iyo hoos) 60 ° / 60 °
Taabta dhabarka (kor iyo hoos) 75 ° / 15 °
Lugaha Lugta (Sare / Hoos / Dibad) 30 ° / 90 ° / 90 °
Janjeer dhinaca dambe (Bidix iyo Midig) 20 ° / 20 °
1 Shaashadda Suuxdinta 1 Cadad
2 Taageerada Jirka 1 Lamaane
3 Taageerada cududda 1 Lamaane
4 Nasashada Garabka 1 Lamaane
5 Jilibka jilicsan 1 Lamaane
6 Hagaajinta haysa 1 Deji
8 Suunka Jirka 1 Deji
Hore: TDY-1 Shiinaha Miiska Hawlgalka Caafimaadka ee Korontada Korontada ee Isbitaalka
Xiga: LEDD500 / 700C + M Saqafkii LED Laydhka qalliinka qalliinka laba-geesoodka leh oo leh Video-Camera
TY ahama Steel Qalliinka Qalliinka Haydarooliga ...
TS-1 ahama Steel Farsamada Haydarooliga Opera ...